Isithombe seviki -
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 16, 2020 00: 25 Awekho amazwana
11 Uma ubona owesifazane omuhle phakathi kwabathunjiwe futhi amthanda futhi ufuna ukumthatha abe ngumuntu wesifazane. 12 Uzomngenisa endlini yakho, azoyiphuca ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 9, 2020 00: 30 Awekho amazwana
Kungani e-DRCongo: Noma ngubani obandakanyeka kwezepolitiki ubizwa ngokuthi "uMhlonishwa Wakhe"? Okufanele isihloko esithi "Ubuhle Bakhe" Noma umuntu eyisifundiswa sezombusazwe ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 2, 2020 00: 30 Awekho amazwana
Kuyini lokho ukukhangisa? Kepha, ngubani onakekela ezokuxhumana kanye nokuMaketha kwale nkampani edumile iDuba ?? Nali ibhizinisi lapho kufanele i-Human Rights Watch iphenye ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Ephreli 25, 2020 00: 30 Awekho amazwana
Lezi zinsalela zomphakathi wase-Yurobhu kufanele zishiya inyama yethu entsha kuphela. Kungamacala lapho ezithela kubukoloni nokuvakasha kwezocansi; ukuthi bayayeka nalemikhuba ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Ephreli 18, 2020 00: 25 Awekho amazwana
Ukufeza lokhu, u-Abdoulaye Gueye usichazela ukuthi ukuphathwa kwamakoloni kwakungahambanga zontathu izindlela. Bekumane kukhawulelwe ezimalini zokuthumela izikole ... Funda kabanzi